ငါးအစာကျွေးစက်,ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ခြောက်စက်စက် stainless steel
ငါးအခြောက်ခံစက် များသောအားဖြင့်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည် ငါးအအေး အတွက် ငါးအစာစက်ရုံ.ကျွန်ုပ်တို့၏ငါးအစာခန်းခြောက်စက်ကိုအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးခြောက်သွေ့စက်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်, နောက်ဆုံးအချောငါးအစာကိုလုံးလေးများမှပါးနေကြသည် ငါးအစာကျွေးစက် ငါးတောင့်ခြောက်စက်, ထို့နောက်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကွက်ခါးပတ်ပေါ်တွင်သယ်ဆောင်သွားသည်. ကွက်ခါးပတ်၏ပြော, ၎င်းသည်အလွှာပေါင်းများစွာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားခြင်းနှင့်ရွေ့ပြောင်းနိုင်သည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြောက်သွေ့ခြောက်အောင်မြန်စေတယ် & မြင့်မားသော - ထိရောက်မှု, ထို့ကြောင့်ရေပေါ်ငါးအစာခန်းခြောက်စက်ကိုပိုက်ကွန်အခြောက်ခံစက်ဟုလည်းခေါ်သည်. ဤရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ခြောက်စက်သည်ငါးအစာစက်ရုံတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာစက်ရုံ,ကြက်အစာကျွေးစက်ရုံ, နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ, အရာခြောက်သွေ့တဲ့ granular ပစ္စည်းများနှင့်လုံးလေးများအထူးသက်ဆိုင်သည်.
Fish Feed Pellet Dryer ၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
Feed pellet dryer တွင်သီးခြားစီသီးခြားစီပါဝင်သည်. တိုင်းယူနစ်စောင်ရေလေမှုတ်စက်၏ဖွဲ့စည်းထားသည်, အပူ device ကို, လေကောင်းလေသန့် & အိပ်ဇောဆေးထုတ်စနစ်. ထပ်ခါတလဲလဲပေါ်သည့်ကြိုးခါးပတ်ကိုသံမဏိကြိုးသို့မဟုတ်ဖောက်ထားသည့်သံမဏိပြားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, ဂီယာအုံများမှတဆင့်လျှပ်စစ်မော်တာမှမောင်းနှင်သည်. ပူသောလေထုအပူချိန်နှင့်စောင်ရေပမာဏကိုအသိဥာဏ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်.
conveyor belt ပေါ်ရှိပစ္စည်းများသည် channel ကို ဖြတ်၍ ပူသောလေအားဖြင့်အပူပေးသည်, အရှင်အစိုဓာတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်. ဤအစာကျွေးခန်းခြောက်စက်များအများအပြားလွတ်လပ်သောယူနစ်ပါဝင်ပါသည်. တိုင်းယူနစ်စောင်ရေပန်ကာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, အပူ device ကို, လေကောင်းလေသန့် & အိပ်ဇောဆေးထုတ်စနစ်. ပူသောလေထုအပူချိန်နှင့်စောင်ရေပမာဏကိုအသိဥာဏ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်.
ပျံ့နှံ့နေတဲ့ပန်ကာရှိပါသည်, အပူ device ကို, လတ်ဆတ်သောလေထု - စုတ်ယူခြင်း - စနစ်နှင့်အိပ်ဇော - ထွက်ပေါက်စနစ်. အော်ပရေတာသည်အပူချိန်၏လွတ်လပ်သောလည်ပတ်မှု parameter ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်, စိုထိုင်းဆနှင့်အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့ပြန်လည်လည်ပတ်မှုနှုန်း, အရာငါးအစာတောင့်အခြောက်ခံ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသေချာ, နှင့်လည်ပတ်မှုအခြေအနေများ၏ optimization. Mesh-belt အမျိုးအစား Fish Feed Dryer သည်ကောင်းမွန်သောလုံခြုံမှုနှင့်လည်ပတ်နိုင်မှုကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်. ခြောက်သွေ့မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပြည့်အဝတံဆိပ်ခတ်ထားသောသေတ္တာထဲတွင်ပြုလုပ်သည်, ထိရောက်စွာဖုန်မှုန့်ယိုစိမ့်ခြင်းကိုရှောင်ရှား. စိုထိုင်းသောပစ္စည်းများသည်အခြောက်ခံစက်တွင်ဂီယာစက်မှရွေ့လျားရန်မောင်းနှင်သောကွက်ခါးပတ်ပေါ်တွင်အညီအမျှပျံ့နှံ့သွားသည်. အောက်ခြေမှထိပ်သို့, ပိုက်ခါးပတ်မှတစ်ဆင့်ပူသောလေထုစီးဆင်းမှုနှင့်ငါးအစာလေးများ. ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၌, အပူလဲလှယ်လုံလောက်ပါတယ် & ယူနီဖောင်း, အလွန်အမင်းမြင့်မားသောဖြစ်ခြင်းခြောက်သွေ့ထိရောက်မှု.
ကွက်ခါးပတ်ကိုလုပ်သည် 12-60 သံမဏိဝါယာကြိုးကွက်ကွက်လပ်နှင့်ငါးအစာကျွေးခြင်းခြောက်စက်အတွင်း၌ရွှေ့ဖို့ဂီယာထုတ်စက်အားဖြင့်ပြောင်းရွှေ့သည်. ခြောက်သွေ့ခြင်းအပိုင်းကိုယူနစ်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်, တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ်လွတ်လပ်စွာပူလေကြောင်းဖြင့်ဖြန့်ဝေသည်. အချို့သောထွက်ကုန်ဓာတ်ငွေ့များသည်အထူးပင်ပန်းနေသောပန်ကာများမှထုတ်လွှတ်သည်, တစ်ခုချင်းစီ၏ယူနစ်ဓာတ်ငွေ့ပမာဏကိုထိန်းညှိသောအဆို့ရှင်ကထိန်းချုပ်သည်. အထက်စောင်ရေယူနစ်၌တည်၏, လည်ပတ်နေသောပန်ကာမှလေသည်ဘေးဘက်လေကြောင်းလမ်းကြောင်းမှယူနစ်၏အောက်ပိုင်းအခန်းထဲသို့ ၀ င်သည်, နှင့်လေကြောင်းစီးဆင်းမှုအပူဖလှယ်မှတဆင့်အထက်သို့အပူနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်ဖြန့်ဝေသည်.
အဆိုပါဂျက်လေယာဉ်ကွက်ခါးပတ်ဆီသို့လွနှင့်ပစ္စည်းဖြတ်သန်းနှင့်အထက်အခန်းထဲသို့ဝင်သည်. ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အပူနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးရန်အတွက်ပူသောလေသည်ပစ္စည်းအလွှာမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်. အထက်ခန်းကိုလေပြွန်ကပန်ကာဝင်ပေါက်နှင့်ချိတ်ဆက်သည်, နှင့်ဓာတ်ငွေ့အရည်အများစုဖြန့်ဝေသည်, နှင့်အပူချိန်အတော်လေးနိမ့်ကျပြီးကြီးမားသောအစိုဓာတ်ပါဝင်သောဓာတ်ငွေ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်အိပ်ဇောပိုက်မှထွက်သောဓာတ်ငွေ့အဖြစ်ထုတ်လွှတ်သည်, အဆိုပါထိန်းညှိအဆို့ရှင်, နှင့်ရေငုပ်ပန်ကာ.
အနိမ့်စောင်ရေယူနစ်၌တည်၏, လည်ပတ်နေသောပန်ကာမှလေသည်အထက်ခန်းထဲသို့ပထမဆုံးဝင်ရောက်သည်, အပူဖလှယ်မှတဆင့်အောက်ဖက်အပူဖြစ်ပါတယ်, ပစ္စည်းအလွှာကိုဖြတ်သန်းနှင့်အောက်ပိုင်းအခန်းထဲသို့ဝင်, နှင့်အောက်ပိုင်းအခန်းကိုဘေးထွက်လေကြောင်းလမ်းကြောင်းနှင့်ပြန်လာလေပြွန်အားဖြင့်ပန်ကာဝင်ပေါက်ချိတ်ဆက်နေသည်, နှင့်ကဓာတ်ငွေ့စောင်ရေအများစုကိုဆေးရုံကဆင်းသည်. အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအပေါ်နှင့်အနိမ့်ပိုင်းလှည့်လည်ယူနစ်များကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်, နှင့်ယူနစ်များ၏အရေအတွက်ကိုလည်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီရွေးချယ်နိုင်ပါသည်.
(ကီလိုဂရမ် / နာရီ) Mesh Belt Power(kw) ပန်ကာပါဝါ(kw) အလွှာအရေအတွက် အလေးချိန်